Alexa သည် Android၊ iOS နှင့် Kindle Fire တို့အားဗွီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုများကိုပြုလုပ်သည် Gadget သတင်း
Alexa သည် iOS, Android နှင့် Kindle Fire မှဗွီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုများကိုချဲ့ထွင်ပြီးကမ်းလှမ်းသည်
Eder Esteban | | အမေဇုံ, နေအိမ်အလိုအလျောက်, နေအိမ်
အမေဇုံ၏လက်ထောက် Alexa ဖြစ်သူ Alexa သည်စျေးကွက်တွင်ဆက်လက်တိုးတက်နေသည်။ ယခုအချိန်အထိ၎င်းကိုအသုံးပြုခြင်းသည်အချို့သောနိုင်ငံများအတွက်သာကန့်သတ်ထားသည်။ သို့သော်အချို့သောစျေးကွက်များ၌ Alexa သည် ၄ ​​င်း၏ကဏ္inတွင်အငြင်းပွားဖွယ်မရှိသောခေါင်းဆောင်အဖြစ်နေရာယူခဲ့သည်။ ဤအကြောင်းကြောင့် Amazon မှသူတို့သည်သူတို့၏လက်ထောက်ကိုစျေးကွက်တွင်ချဲ့ထွင်ရန်ဆက်လက်လုပ်ဆောင်စေလိုသည်။ အခုတော့ အသစ် wizard ကို features တွေကြေငြာခဲ့သည်.
ကုမ္ပဏီအနေဖြင့်၎င်း၏လက်ထောက်သို့နောက်ထပ်လုပ်ဆောင်ချက်အနည်းငယ်ထပ်မံထည့်သွင်းရန်ဆုံးဖြတ်သည်။ သူတို့ကဗီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုလောကသို့ဝင်ရောက်ကတည်းက။ ပိုပြီးတိတိကျကျပြောရမယ်ဆိုရင် Alexa မှတစ်ဆင့်ဗီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုသည် Kindle Fire၊ Android ထုတ်ကုန်များနှင့် iPad နှင့်အခြား iOS ထုတ်ကုန်များသို့ချဲ့ထွင်နိုင်သည်.
၎င်းသည်အမေဇုန်လက်ထောက်အတွက်အရေးကြီးသောခြေလှမ်းဖြစ်သည်။ ၎င်း၏ပြိုင်ဘက်များ၏မြေများတွင်လည်းလွှမ်းမိုးစတင်ရန်ရှာကတည်းက။ သူတို့လိုချင်တာအတွက် Android ဖုန်းများပေါ်တွင် Google Assistant ထက်သာလွန်။ ဘယ် Google ကိုကြီးမားတဲ့ခြိမ်းခြောက်မှုဖြစ်ပါတယ်
သူတို့မိတ်ဆက်ပေးသည့်လုပ်ဆောင်ချက်အသစ်မှာဗွီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုနှင့်ဤစက်ပစ္စည်းများမှမက်ဆေ့ခ်ျပို့ခြင်းဖြစ်သည်။ ဒီလိုလုပ်ဖို့ Alexa application ကိုစက်မှာ install လုပ်ဖို့လိုတယ်။ ဒါ့အပြင်အသုံးပြုသူသည်ဘာမှလုပ်စရာမလိုပါ။ သင်ရုံစကားပြောနှင့်အိမ်စာလုပ်ဖို့လက်ထောက်ကိုတောင်းရန်ရှိသည်။ သူတို့ကဘယ်အချိန်မဆိုစာရိုက်ဖို့မလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။
Alexa ကိုခေါ်ပြီးခေါ်ဆိုပါ (ဆက်သွယ်ရန်အမည်) ။ ဤနည်းအားဖြင့်အမေဇုံလက်ထောက်ကထိုသူနှင့်ဗီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုကိုစတင်မည်။ အလွန်အသုံးဝင်ပြီးအသုံးဝင်သောလွယ်ကူမှုအတွက်ထူးခြားသောလုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခု။
Amazon သည် smart assistant market ကိုအောင်မြင်စွာဝင်ရောက်နိုင်ခဲ့သည်။ Alexa သည်အမေရိကန်ကဲ့သို့သောနိုင်ငံများတွင်အကြီးအကျယ်ထိခိုက်သည်။ ဒါကြောင့်ဥရောပဈေးကွက်မှာလည်းအချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိရှိနေပါတယ်။ ဤကဲ့သို့သောလုပ်ဆောင်ချက်များဖြင့်သင်၏ပြိုင်ဆိုင်မှုအတွက် ပို၍ ရှုပ်ထွေးစေရန်သေချာပါသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Gadget သတင်း » နေအိမ် » Alexa သည် iOS, Android နှင့် Kindle Fire မှဗွီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုများကိုချဲ့ထွင်ပြီးကမ်းလှမ်းသည်
ဖွဲ့စည်းထားသောရာဇ ၀ တ်မှုအတွက်ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော BlackBerrys အားရောင်းချသောအထူးကုမ္ပဏီတခုကိုပိတ်ထားသည်